Madaxda ugu sarreyso HirShabeelle oo laga gudbiyey mooshin xilka qaadis ah | XORRIYA NEWS
Home Wararka Madaxda ugu sarreyso HirShabeelle oo laga gudbiyey mooshin xilka qaadis ah
Madaxda ugu sarreyso HirShabeelle oo laga gudbiyey mooshin xilka qaadis ah
Kala aragti duwanaasho u dhaxeeysa Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Cusmaan Barre ayaa saacadihii la soo dhaafay sii xoogeystay, iyadoo caasimada maamulka goboleedka ee Jowhar uu ka bilowday mooshin iska soo horjeeda.
Sida wararku sheegayaan xalay waxaa magaalada ka jiray xaalad kacsanaan siyaasadeed oo ka dhalatay, markii Guddoomiye kuxigeenka 1aad Cabdi Xuseen Geeddi uu ku dhawaaqay inuu qabtay mooshin ka dhan ah Guddoomiyaha Baarlamaanka oo ay ku saxiixan yihiin 63 Xildhibaan.
Sheekh Cusmaan Barre waxa uu ku eedeeyay Madaxweynaha musuq maasuq.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa isna shir jaraa’id uu hoygiisa ku qabtay waxaa uu ku shaaciyay in mooshin ka dhan ah Madaxweyne Waare uu qabtay, isagoo ku eedeeyay Madaxweynaha musuq maasuq.
Sheekh Cusmaan Barre ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka inay soo farageliyaan waxa ka socda magaalada Jowhar.
Madaxweynaha ayaa hesyta garabka ugu balaaran ee xildhibaanada Hirshabelle.
Waxaa magaalada ka jirta olole lagu kala jiidanayo Xildhibaanada, waxaana la sheegayaa in Xildhibaannada taageersan Madaxweynaha ay yihiin kuwo aad u xooggan.
Xafiiska Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si weyn ugu lug leh Mooshinka Guddoomiyaha Baarlamaanka, iyadoo la sheegayo inay bilaabatay bixinta lacag lagu kala jiidanayo Xildhibaannada oo dhanka Xafiiska Madaxweynaha ka socota.
Madaxda maamulka Hirshabeelle oo muddo xileedkoodu yahay mid gabogabo ah ayaa mar kale lugaha la galay qalalaase siyaasadeed oo Hoggaanka sare u dhaxeeya, waxaana dad badan filayeen in la guda galo howlihii doorashada maamulkaas, maadaama 6 bilood ay u harsan tahay Xildhibaannada iyo Madaxda maamulka.